Nzọụkwụ nzọụkwụ ị ga-eme n'ụlọ - Ikkaro
Iji aka anyị eme ihe bụ ezigbo ihe ọ pleasureụ. Mepụta ihe site na ihe ọ bụla. Inwe ike imegharị ihe ndị anyị kwenyere na ha abaghị uru ma hụ na anyị nyere ha ndụ nke abụọ.
Mee omenkà ma mee ka ha maa mma. Nke ahụ amaka.
Crafts, Mee N'onwe Gị, otú, intermingle enweghị nwere doro anya nkewa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na blọọgụ anyị nwere ike ikwu bụ ọrụ, mana na ngalaba a, anyị gụnyere isiokwu ndị anyị na-eme ihe
Otu esi eme ugu ugu Halloween
N'abalị ikpeazụ m mere na ọsọ ọsọ mbụ m halloween. O gbagwojuru ya anya na agbanyeghị na m ga-eme ya n’abalị ma enweghị m ọkụ ndị dị mkpa iji were foto dị mma. Ugu nke ị ga-ahụ bụ otu mgbe niile ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-acha oroma na-enwu gbaa na oge ndị ọzọ ọ nwere ụda akwụkwọ ndụ.
N'afọ a azụrụ m ugu, ka ha na-etinye na aha dị iche iche: Halloween, nke ọma, ọ naghị enye anyị ọtụtụ ozi, na-abụkarị site na ihe m gụrụ (iji hụ ma mmadụ nwere ike ikwenye ya) ha na-eji (Cucurbita Pepo, Mixed cucurbita, Oke cucurbita, Cucurbita moschata) kedu ihe bụ Ugu America, nke ha na-eji Jack o lantern, nke ahụ bụ Halloween ugu.
Otu esi eme mgbanaka nwere pencils
Nke a bụ otu n'ime ndị obere amamihe na ị na-ahụ onwe gị oge ụfọdụ na web nakwa na ha na-eme ụbọchị gị.
Ee, anyị ga-amụta otu esi eme a arụrụ n'ụlọ mgbanaka nke osisi crayons, na na ọ dị ka ọ dị, jụụ dị ka nke a
Loved hụrụ ya n'anya n'ezie. Ọfọn, lee otu esi eme ya, ọ dị mfe. Ọ bụ ezie na na foto nke nkuzi ha na-eji lathe, anyị nwere ike ime ya n'ụzọ ọzọ eji eme ụlọ ọ bụ ezie na anyị ga-etinye oge karịa na ụfọdụ ngwa ọrụ ọtụtụ, ọbụlagodi na ngwaọrụ eji aka.
Otu esi eme mkpuchi na EVA roba iji kwụọ ekwentị gị
Ọtụtụ mgbe mgbe anyị na-ana mobile Anyị amaghị ebe anyị ga-ahapụ ya ma anyị kwụsị izu ike ya n’ala, ma ọ bụ n’elu igwe radiator, n’elu tebụl dịpụrụ adịpụ ebe eriri na-ahapụ eriri ya na ihe egwu na onye ọ bụla gafere anyị ga-atụ anyị.
Aga m eme ihe dị mfe ikpe iji jide smartphone na chaja n'onwe ya ma chefuo maka nsogbu ndị a.
Enwere ike iji arịa karama efu mee ya, na-eme obere nkata, mana nsonaazụ ya jọkarịrị njọ.
Egweri Mkpọ tuna
Fantastic na mfe nka iji soro umuaka mee. Ọ bụ ihe imegharị ma ọ bụ jigharịa tuna iji nweta ndị kandụl ma ọ bụ ite ifuru. Anyị ga-enweta nsonaazụ dị ukwuu na obere sekọnd.
Ya mere, ka anyị gbadaa azụmahịa.
Anyị ga-achọ ite eji na obere akwa osisi. Na ndị nke osisi, ọ mara ezigbo mma, mana nwere akwa tweezers nwere agba, anyị ga-enwetakwa ezigbo nsonaazụ ;-)
Otu esi eme ka kaadị ekeresimesi emere
Ekeresimesi na-abịa !!! Oge eruola ịmalite ịkwadebe ọrụ anyị chọrọ iji n'ime izu ole na ole. Na… Nọgidenụ na-agụ ihe
-Esi mee ka a obi Mr.
Ka anyị nwaa ọrụ aka dị mfe nke ga-aghọ ihe egwuregwu ụmụaka na-amasịkarị n'ụlọ. Ama m … Nọgidenụ na-agụ ihe
Agba na kaadiboodu akwa iko
Site Ahịhịa gosi anyi oru Enno nke Kroon
Ọbụna o nyewo omume a aha Ọkpụkpụ
Ruo ugbu a, anyị ejirila iko ọnụọgụ artón, n'ime ụlọ na-enweghị ụda ma ọ bụ akụrụngwa egwu na igwu egwuregwu. Mancala
Otu esi eji igwe oku abuo
@irreductible na-eme ka m mara site na twitter banyere nkuzi a. Eziokwu bụ na echere m na ọ bara uru imegharị ya na ọ ka dị ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme ọjị ndọta
Like na-amasị gị biya karama okpu?
Ọma ka anyị mee ha magnetik. Ka ọ were? N'ihi na tinye ha na ngwa nju oyi ma nwee ike igosipụta ha, n'ihi na mee egwuregwu magnetik dịka ọmụmaatụ ndị na-enyocha ego ma n'ezie ị nwere ike iche maka ụfọdụ ojiji ndị ọzọ.
Esi mee ọcha
Unu nile mara ihe a White mbadamba.
Umu oji ndia nke nwere ihe nnogide puru iche i nwere ike ide ma hichaa otutu oge ichoro.